Neymar Jr Oo Ka Hadlay Dhaawacii Gaaray+VIDEO+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Neymar Jr Oo Ka Hadlay Dhaawacii Gaaray+VIDEO+SAWIRRO
Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa ka hadlay dhaawac gaadhay intii ay socotay ciyaartii dalkiisu 1-0 kaga adkaaday Cameroon oo ka dhacday magaalada London.
Neymar ayaa xanuun muruqa ah dareemay markii uu garoonka ku jiray lix daqiiqadood oo kaliya, waxaanu ka baxay ciyaarta iyadoo loo kexeeyey cusbitaal lagu hubiyo xaalkiisa intii ay ciyaartu socotayba, hase yeeshee waxa uu dhaawacaasi argagax ku riday PSG oo ay kusoo fool leedahay ciyaarta Champions League ee ay Arbacada soo socota ku qaabbili doonto Liverpool.
Sidoo kale waxa ka dhaawacmay PSG, weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe.
Haddaba, xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa farriin uu ku baahiyey bartiisa Instagram waxa uu ku sheegay in dhaawaciisu aanu halis ahayn, waxaanu ugu mahad celiyey qof kasta oo usoo diray farriin uu caafimaad ugu rajaynayo.
“Wuu mahadsan yahay qof walba oo iisoo diray farriin uu caafimaad iigu rajaynayo. Waxay ila tahay in aanay khatar jirin.” ayuu ku yidhi qoraalkiisa.
Warkan farxadda u leh PSG ayaa waxa hore ishaaro la mid ah midda Neymar u bixiyey dhakhtarka xulka qaranka Brazil oo tibaaxay in inkasta oo aan baadhitaan buuxa la samaynin ay u badan tahay in aanay halis badan jirin.
Si kastaba ha ahaatee, weli lama sheegin in Neymar uu diyaar u noqon karo ciyaarta Liverpool ee usbuuca soo aaddan iyo in kale.